सुशील समूहलाई मत दिनुपर्ने आधार के हो?
अहिले पार्टीभित्रका नेतामध्ये शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा स्पष्ट अडान लिने, पार्टीलाई मूल्यका आधारमा अघि बढाउने, कार्यकर्तालाई न्याय गर्ने , सबै क्षेत्रका कार्यकर्तालाई अवसर दिने, मूल्यांकनको माग पूरा गर्ने अहिलेका कार्यभार सम्पन्न गर्न सुशील कोइरालाजस्ता व्यक्तित्व चाहिन्छ। यसैले उहाँको समूहलाई मत दिनु आवश्यक छ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यमान्यतामा आधारित पार्टी भएको कारणले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न हुँदैन। निर्वाचनमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ।
तपाईले अडान लिनसक्ने नेतृत्व आवश्यक छ भन्नुभयो। अहिले अडान लिनेको नेताको आवश्यकता हो कि लचिलो हुने नेतृत्वको?
अहिलेको राजनीतिक गतिरोध हामी आवश्यकताभन्दा धेरै लचिलो भएकाले पनि उत्पन्न भएको हो। विगतका सहमति, संझौताको अक्षरशः कार्यान्वयन भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। पहिलो काम माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु थियो। त्यो भइसकेको छ। अब भएका सहमति कार्यान्वयनमा अडान लिनसक्ने नेता नभए शान्ति प्रक्रियै प। धकेलिन सक्छ। जुन उद्देश्यबाट शान्ति प्रक्रिया सुरू भएको हो, त्यो टुंगो त लाग्नुपर्‍यो नि। यसो गर्न दृढ नेतृत्व चाहिन्छ। अहिले लचिलो हुनेभन्दा अडिनसक्ने नेताले सहमति कार्यान्वयन गर्नसक्छ। सुशील कोइरालामा त्यस्तो क्षमता छ। शान्ति प्रक्रियालाई लम्याइरहेर गिरिजाबाबुको नीतिलाई कार्यान्वयन हुने त होइन नि।
तपाईलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन त निकै समस्या पर्‍यो नि ?
प्रत्याशी धेरै भएपछि समय लागि हाल्छ। सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा काम गर्न चाहने धेरै देखिए। सबैलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने भएकोले धेरै जनासँग परामर्श भए। यो महाधिवेशन अत्यन्त संवेदनशील समयमा भैरहेको छ। सभापतिको प्रमुख सहयोगी गलत भए चुनावकै नतिजा पनि प्रतिकूल हुनसक्छ। त्यसैले सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति छान्ने क्रममा समय लागेको हो।
तपाईलाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा सुजातालाई महत्वपूर्ण पद दिने आश्वासन दिइएको छ रे। हो?
सुशील कोइराला पार्टी सभापतिको उम्मेदवार। सभापतिले आफू अनुकूलको टिम बनाउनुपर्छ। आफूलाई सहयोग हुने समूह बनाउने उहाँको काम हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिको आवाजको कदर गर्नुपर्‍यो। नेपाली कांग्रेसभित्र आन्दोलनका बेला, पार्टीका लागि त्याग गर्ने बेलामा पूरै परिवारले गर्नुुपर्छ तर अवसर लिने बेलामा एक जनाले मात्र लिनुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यही मानसिकताले एउटै परिवारका धेरै जना पदाधिकारीमा उमेदवार भए कार्यकर्ताले अप्ठेरो मान्लान् भनेर पनि हो। कांग्रेसमा सुजाताजीको आफ्नै स्थान छ। धेरै पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकोले उमेदवारी घोषणा गर्न केही ढिलो भएको हो तर पार्टी हाक्न उहाँले राम्रो टिम बनाउनुभएको छ।
महामन्त्रीका अन्य आकाक्षीसँग उमेदवारी घोषणापछि तपाईको कुनै संवाद भएको छ?
कुरा भइरहेको छ नि। धेरै जना त सक्रियरूपले चुनाव अभियानमै लागेका छन् । भेटघाट र चुनावी काम भइरहेका छन्।
उम्मेदवारी घोषणा ढिलो भएकोले प्रचारमा समस्या त परेको छैन?
यो महानिर्वाचन हो र? पार्टीको चुनाव हो। पार्टीभित्रको चुनावमा पाँच मिनेटअघि उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि परिणाम उस्तै आउने हो।
सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको सानो समूहमात्र किन बनेको? के छ महामन्त्रीको आकर्षण?
महामन्त्री सभापति पछिको दोस्रो महत्पूर्ण पद हो। केन्द्रीय कार्यसमितिमा सबैभन्दा क्रियाशील हुने यस पदमा आकर्षण स्वाभाविकै हो। सभापतिको सहयोगी हात त हुनैपर्‍यो नि। आफूलाई सजिलो हुने महामन्त्री हुनुपर्‍यो। सभापति दाँयातिर हेर्ने, महामन्त्री बाँयातिर हेर्ने भयो भने त कार्यसमिति चलाउनै पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले सभापतिलाई सजिलो हुने मिनी प्यानेल बनेको हो।
सुशील कोइराला त टिम बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन, तपाईहरूकै दबावमा प्यानल बनेको भन्छन् नि हो?
उहाँको चाहना नभएको भए त बनाउनु हुने नै थिएन नि। पार्टीभित्रको अधिवेशनमा एउटा पक्षले टिम घोषणा गर्ने अर्कोले नगर्ने भन्ने हुँदैन। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीको चालअनुसार आफू पनि चल्नसक्नुपर्छ।
काठमार्डौ कांग्रेसको अधिवेशनमा तपाई खुलेर लाग्नुभयो तर परिणाम तपाईको पक्षमा आएन त्यसले तपाईलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको विश्लेषण हुँदैछ। हो?
काठमाडौंका दसमध्ये आठ क्षेत्रका सभापति मैले प्रोत्साहित गरेकै छन्। निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि एकाधबाहेक मेरै शुभेच्छुक साथी छन्। जिल्ला नेतृत्वमा केही प्राविधिक कुरा नमिलेर मेरो पक्षका उम्मेदवार थोरै भोटले सफल हुन सकेनन् । निर्वाचित हुने ५० सदस्यीय जिल्ला समितिमा ३४ जना हाम्रा पक्षका छन्। सचिव, कोषाध्यक्ष पनि हामीले उठाएकैले जितेका छन्। यसैले हल्ला गरिएजस्तो अवस्था छैन।
केन्द्रीय नेतृत्वले जिल्ला राजनीतिमा हाल्नु हुन्न भनेको पनि सुनिन्छ तर यसमा मेरो स्पष्ट विचार छ। म यहाँबाट पटकपटक जिल्ला सभापति भएको छु। आफ्ना सहयोगीलाई संरक्षण गर्नु मेरो जिम्मेवारी पनि हो। नेतृत्व हस्तान्तरणमा आफ्ना सहयोगीलाई सहयोग नगर्ने भन्ने त हुँदैन नि। अरू नेताले लुकेर गर्लान् म खुलेर गर्र्छु। फरक त्यत्ति हो। खेल्दा जर्सी लगाउनैपर्छ। चुनाव हुँदा एउटा टिममा त उभिनै पर्‍यो।
अहिले तपाईँ त फरक जर्सी लगाएर मैदानमा उभिनु भएको छ नि। विरोध गर्दै आएको टिमको जर्सी लगाउँदो असजिलो लागेको त छैन?
अहिलेको महाधिवेशनमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थाअनुसार मैले जर्सी रोजेको हुँ। र नेपाली कांग्रेसकै जर्सी हो। मलाई कुनै अप्ठेरो लागेको छैन। मैले कांग्रेसमा विधिविधानअनुसार काम हुनुपर्‍यो भन्ने गरेको हो। अहिले पनि म विधिविधान र संस्थागतरूपमा काम गर्नुपर्छ भने पक्षमा छु।
महाधिवेशनपछि कांग्रेस कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईहरू जितेको अवस्थामा र पराजित भएको अवस्थामा?
ताजा जनादेश पाएको टिमले काम गर्छ। पराजित हुने त कुरै नगर्नोस्। हामी जित्छौं। चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर सकिएपछि लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार जित्नेले हार्नेलाई सम्मान गर्ने र हार्नेले पनि जित्नेलाई मागेको सहयोग गर्ने चलन कांग्रेसमा छ।
तपाईको एजेन्डा के?
शान्ति, सम्वृद्धि र लोकतान्त्रिक संविधाननै प्रमुख एजेन्डा हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरौँ भन्ने कांग्रेसको मूल नारानै मेरो नारा हो। मेरो व्यक्तिगत एजेन्डा पार्टीलाई विधीसम्मतरूपमा नीति र कार्यक्रमअनुसार चलाउनुपर्छ, व्यक्तिवादी बनाउनु हुन्न भन्ने हो।
कांग्रेसको संगठन अरू पार्टीका तुलनामा कमजोर मानिन्छ। महामन्त्रीको उमेदवारका रूपमा पार्टी संगठनसम्बन्धी कुनै योजना छ?
हामीले अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने नीति कार्यक्रमलाई केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँहुँदै बुथ कमिटीसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर कांग्रेसको विचार, नीति र आदर्श यो हो, हाम्रा कार्यक्रम यी यी हुन् भनेर जनतामाझ जानुपर्छ। प्रभावकारी नेतृत्व भएमात्र नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनसक्छ। कांग्रेस पहिलो पटक विधिवत् समावेशी भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि महिला, दलित, जनजाती, मधेसीलगायत सबैको सहभागिता हुनेछ। अब कांग्रेस सबैको पार्टीका रूपमा समयको मागअनुसार चल्छ।
कांग्रेसमा पनि पूर्णकालीन कार्यकर्ता राख्नुपर्छ भन्न थालिएको छ। तपाईको धारणा?
पूर्णकालीन कार्यकर्ताबारे छलफल भैरहेको छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसको चरित्र कम्युनिस्टको भन्दा फरक हुन्छ र हुनुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीकैजस्तो संरचना कांग्रेसले बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। कांग्रेस 'मास बेस' पार्टी भनेर चिनिएको छ। यसलाई यस्तै रूपमा राख्नुपर्छ। मास वेस भनेको कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणसमेत नदिएर त्यत्तिकै बस्ने भन्ने त होइन नि।
प्रस्तुति : विश्वमणि पोखरेल